site na nchịkwa na 21-07-24
A na-etinye DAC Cables na AOC Cables na ebe data maka sistemụ ịgbakọ netwọkụ nwere arụmọrụ dị elu n'ihi latency ala ha, ike dị ala yana ọnụ ala. Direct Attach Cable (DAC) nwere eriri ọla kọpa twinax ， DAC nwere ike kewaa ya okpukpu abụọ: DAC na -agafe agafe & a ...
Teepu eletriki rọba na mmepụta eriri waya.
site na nchịkwa na 21-01-29
Teepu winding bụ usoro nchebe kachasị eji eme ihe maka eriri waya. Dị ka nchedo larịị nke waya njikota, teepu asọfe ụzọ na -ekewa zuru winding, ele mmadụ anya n'ihu asọfe, na ụkpụrụ asọfe. A ghaghị idozi na ijikọ wiwi ụgbọ ala niile ...
Imebe mmiri nke mpaghara akọrọ na mpaghara mmiri na ihe mkpuchi wiwi
Ngwongwo eriri eletriki dị ala na-ejikọ akụrụngwa eletrik nke ụgbọ ala niile, na-arụ ọrụ ikesa nkesa na nnyefe akara, yana sistemụ ụjọ nke ụgbọ ala. Iji hụ na nkwụsi ike nke sistemụ wiring, ọ bụ ...
Olink isonye na ihe ngosi a
NKỌRỌ ONYE AKA -AKA
Amụba tarifu mbubata nke China na -abawanye na njikọta mbụ nke US
Dika onye otu kọmịshọna tarifụ kọstọm nke State Council kwupụtara ọhụrụ na Aug 8th, a ga -ahazi ndepụta ngwongwo tarifụ US. Akụkọ ọjọọ bụ na njikọ ahụ ga -abụ ngwaahịa mpaghara izizi wetara tarifu 25%. Nke a bụkwa ngwaahịa mbụ na ele ...